Isikhumulo sezindiza i-Wau sivuleka kabusha ngemuva kokuphahlazeka kwendiza iMega Aircompany
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Airlines » Isikhumulo sezindiza i-Wau sivuleka kabusha ngemuva kokuphahlazeka kwendiza iMega Aircompany
Airlines • Airport • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba • ISouth Sudan Izindaba Ezintsha • Ezokuvakasha • Transportation • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba
Ukuqhutshwa kwezindiza kuqale kabusha esikhumulweni sezindiza eWau, ngemuva kwamahora kuvaliwe ngoLwesine kusihlwa kulandela ukuphahlazeka kwendiza ethwala impahla iMega Aircompany.
Ibhanoyi ebelithwala impahla belisuka eJuba liya Kwajok naseWau belilayishe izitokisi zezokwelapha ze-UNICEF ngesikhathi lishayisa esikhumulweni sezindiza saseWau ngemuva kokubhekana nezinkinga zobuchwepheshe ngevili laso.
Ibhanoyi belithwele abasebenzi abayisihlanu kuphela abasinde kule ngozi ngokuphepha.
Umqondisi wesikhumulo sezindiza iWau Airport uJohn Akot uthe lesi sehlakalo sidalwe ukwehluleka kwesondo ngenxa yokushoda kukagesi.
Isikhumulo sezindiza sesiqale kabusha imisebenzi yaso ejwayelekile njengoba abantu bekhombisile namhlanje ekuseni, izindiza zeBadr nezindiza zeNhlangano sezifikile. Izolo, bekuyisigameko esincane nje lapho ibhanoyi belivela eKwajok liza eWau bese liphethe uhlobo oluthile lomuthi we-UNICEF, ”kuqhuba uJohn Akot
“Ekugcineni ngokubambisana kwe-UNMISS, sikwazile ukuyikhiphela ngaphandle komgwaqo manje indiza iphephile. Futhi, abasebenzi baphephile futhi akekho olimalile, ”echaza ngaphambi kokugcizelela“ Isikhumulo sezindiza manje sisebenza ngokujwayelekile.
Akukhona okokuqala kuphahlazeka indiza esikhumulweni sezindiza iWau. ngonyaka odlule ngoMashi, iRussia Antonov AN-26 eyaziwa ngeSouth Sudan Supreme eyayithwele abagibeli abangaphezu kwabangu-40 yaphahlazeka esikhumulweni sezindiza eWau. Ingozi kusolwa isimo sezulu esibi.